Dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeedo oo ka socda Boosaaso. -
HomeWararkaDhaq-dhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeedo oo ka socda Boosaaso.
Dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeedo oo ka socda Boosaaso.
November 27, 2021 M.Jo Wararka 0
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Berri ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeedo uu halkaa ka taagan yahay, iyadoo ay wadaan Ciidamada PSf ta iyo Ciidamo kale duwan oo iskugu jira Boolis iyo Militari kuwaas oo taageersan Madaxweynaha Puntland,
Dowlad Goboleddka Puntland ayaa saacaddihii lasoo dhaafay Boosaaso geesay boqolaal askari oo kala yimid magaalooyinka Garowe iyo Gaalkacyo, waxaana maamulka ay wacad ku mareen in ay soo celin doonaan xasiloonidii magaaladaasi ay all cilan doonaan islamarkaana dhaqan galinayaan xilka qaadistii agaasimihii PSF ta oo iska diiday Amarka Madaxweyne Deni.
Cabsi badan ayay dareemayaan dad ku sugan magaalada Boosaaso, waxaana ay sheegeen in magaalada ay buux dhaafiyeen ciidamo kala taageersan labada dhinac.
Hay’adda PSF ta ayaa shalay mar kale ku celisay in aysan aqoonsanayn xilka qaadistii Madaxweyne Siciid Deni ku sameeyay Agaasimaha PSF Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano.
Sidoo kale, Shalay ayey ahayd markii shir jaraa’id ay qabteen saraakiil ka tirsan PSF iyagoo sheegay in aysan waxba iska beddelin mowqifkii hay’addu kaga hortimid xilka qaadistii uu sameeyay Madaxweynaha Puntland.
Puntland ayaa cabsi weyn ka qabta in ciidankaasi ay qalqal galiyaan Amniga doorashada golaha Shacabka oo lagu waddo in lagu qabto Magaalada Boosaaso kuraas ka mid ah.